အူမကြီးကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုတယ်ဆိုရင် တော့ ဒီဆေးဥ လေးကို ကြိုတင်မှီဝဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ထားလိုက်ပါ - ABCMM
အူမကြီးကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုတယ်ဆိုရင် တော့ ဒီဆေးဥ လေးကို ကြိုတင်မှီဝဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ထားလိုက်ပါ
Phoe Toke · Posted on May 24, 2019 July 25, 2019
သင့်အနေနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုပါသလား? အဲ့ဒါဆိုရင် တော့ ဒီဆေးဥ လေးကို ကြိုတင်မှီဝဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ထားလိုက်ပါ။၀ဥဟာ နှစ်ရှည်ခံ ပျော့ပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ် နဲ့ အရိပ်အာဝါသကောင်းတဲ့ နေရောတွေ၊ အစိုးဓါတ်ကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ သဘာဝအတိုင်း ပေါက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။
၀ဥဟာ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ဥသစ်ဖု ဖြစ်သလို စာသောက်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုလည်း ထုတ်လုပ်စားသုံးနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားထိ တင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ဥရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြရရင်တော့ အစာချေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အစားအစာဖြစ်သလို ကိုလက်စထရော ပါဝင်မှုများလို့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးသွေးကြော ပိတ်တာကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှလုံးရောဂါ ကင်းဝေးစေမှာပါ။
မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော့စဖောရ်စ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ တခြားအဟာရဓါတ်တွေများစွာပါဝင်လို့ မှတ်ဥာဏ်ကိုကောင်းမွန်စေသလို အာရုံ စူးစိုက်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို သန့်စင်ပေးပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုလို ခန္တာကိုယ်အတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးလို့ အသည်းအဆီဖုံးတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ အသည်းကို ကျန်းမာစေမှာပါ။
ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ဖောင်းပွမှုအားကောင်းတယ် ဒါ့ကြောင့် စားသုံးသူကို ဗိုက်ပြည့်စေပြီး အဆာခံနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စားသုံးပေးရင် ကိုယ်အလေးချိန်မှန်ပြီး ကျန်းမာစေမှာပါ။
ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ Carcinogens ကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ Diosgenin ပါဝင်ပါတယ်။ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ ပရိုတင်လည်းပါဝင်ပြီး သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်တွေကို မြင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အင်ဆူလင်ပမာဏ ပါဝင်မှုနည်းလို့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို လျှော့နည်းစေပြီး သကြားဓါတ်ကို စုပ်ယူဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းကိုလည်း ညီမျှစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ၀ဥမှာ အဟာရဓါတ်တွေ မြင့်မားစွာပါဝင်နေလို့ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
သငျ့အနနေဲ့ အူမကွီးကငျဆာ၊ နှလုံးရောဂါတှကေို ကွိုတငျကာကှယျလိုပါသလား? အဲ့ဒါဆိုရငျ တော့ ဒီဆေးဥ လေးကို ကွိုတငျမှီဝဲပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ကာကှယျထားလိုကျပါ ။ဝဥဟာ နှဈရှညျခံ ပြော့ပငျမြိုးဖွဈပါတယျ။ သဈရိပျဝါးရိပျ နဲ့ အရိပျအာဝါသကောငျးတဲ့ နရေောတှေ၊ အစိုးဓါတျကောငျးတဲ့ နရောတှမှော သဘာဝအတိုငျး ပေါကျရောကျလရှေိ့ပါတယျ။
ဝဥဟာ ဆေးဖကျဝငျ သဈဥသဈဖု ဖွဈသလို စာသောကျကုနျအမြိုးမြိုးကိုလညျး ထုတျလုပျစားသုံးနိုငျတဲ့အတှကျ နိုငျငံခွားထိ တငျပို့ရောငျးခနြတောဖွဈပါတယျ။ ဝဥရဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖျောပွရရငျတော့ အစာခစြေနဈကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ။
အဆီပါဝငျမှုနညျးတဲ့ အစားအစာဖွဈသလို ကိုလကျစထရော ပါဝငျမှုမြားလို့ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခရြာမှာ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သှေးလညျပတျမှုကို ကောငျးမှနျစပွေီး နှလုံးသှေးကွော ပိတျတာကို သနျ့စငျပေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နှလုံးရောဂါ ကငျးဝေးစမှောပါ။
မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ဖော့စဖောရျဈ၊ ကယျလျဆီယမျ၊ ပိုတကျဆီယမျ နဲ့ တခွားအဟာရဓါတျတှမြေားစှာပါဝငျလို့ မှတျဉာဏျကိုကောငျးမှနျစသေလို အာရုံ စူးစိုကျမှုကို အားကောငျးစပေါတယျ။
အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးကို သနျ့စငျပေးပွီး အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပေးနိုငျပါတယျ။ အခုလို ခန်တာကိုယျအတှငျးက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးလို့ အသညျးအဆီဖုံးတာမြိုးမဖွဈစဘေဲ အသညျးကို ကနျြးမာစမှောပါ။
ရမှောပြျောဝငျနိုငျပွီး ဖောငျးပှမှုအားကောငျးတယျ ဒါ့ကွောငျ့ စားသုံးသူကို ဗိုကျပွညျ့စပွေီး အဆာခံနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျစားသုံးပေးရငျ ကိုယျအလေးခြိနျမှနျပွီး ကနျြးမာစမှောပါ။
ကငျဆာဖွဈစတေဲ့ Carcinogens ကို တိုကျဖကျြပေးနိုငျတဲ့ Diosgenin ပါဝငျပါတယျ။ ကာဘှနျဟိုကျဒရိတျနဲ့ ပရိုတငျလညျးပါဝငျပွီး သငျ့ရဲ့ စှမျးအငျတှကေို မွငျ့တငျပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျ C ကွှယျဝစှာပါဝငျလို့ အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။
အငျဆူလငျပမာဏ ပါဝငျမှုနညျးလို့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျကို လြှော့နညျးစပွေီး သကွားဓါတျကို စုပျယူဖယျရှားပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဆီးခြို သှေးခြို ရောဂါ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ဟျောမုနျးကိုလညျး ညီမြှစပွေီး ရောငျရမျးမှုကို သကျသာစတေဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဝဥမှာ အဟာရဓါတျတှေ မွငျ့မားစှာပါဝငျနလေို့ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။